I-Raw LCZ696 powder (936623-90-4) hplc =98% | Ukurhoxisa iR & D Reagents
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / LCZ696 powder (936623-90-4)
Akukho kalo SKU: 936623-90-4. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-LCZ696 powder (936623-90-4), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) ilungu leklasi elitsha lee-agents ezibizwa nge-angiotensin receptor-neprilysin inhibitors (ARNIs) ezidibanisa i-neprilysin inhibitor kunye ne-angiotensin receptor blocker (ARB). I-LCZ696 powder njengamanje iboniswa ukunyanga izigulane ezinokuphelelwa yintliziyo ngeqhekeza elincinciweyo (HFrEF) endaweni ye-angiotensin yokuguqula i-enzyme (ACE) inhibitor okanye i-ARB yodwa. Igama lezorhwebo le-LCZ696 powder yi-Entresto.
LCZ696 powder ividiyo
LCZ696 powder Abalinganiswa basisiseko
igama: LCZ696 powder
I-molecular Formula: C24H29N5O3.C24H29NO5.5/2H2O.3Na
Isisindo somzimba: 915.98
Isitoreji sokugcina: kwi -20 ° C iminyaka eyi-3 Ubuninzi
I-LCZ696 powder ekunciphiseni umngcipheko wokufa kwentliziyo kunye nentliziyo
I-LCZ696 powder, i-sacubitril powder, i-valsartan, i-LCZ 696, iLCZ-696
I-Raw LCZ696 Ukusetyenziswa kwePowder
I-LCZ696 powder (ilungu le-sacubitril / valsartan powder) ilungu leklasi elitsha lee-agents ezibizwa nge-angiotensin receptor-neprilysin inhibitors (ARNIs) ezidibanisa i-neprilysin inhibitor kunye ne-angiotensin receptor blocker (ARB). I-LCZ696 powder njengamanje iboniswa ukunyanga izigulane ezinokuphelelwa yintliziyo ngeqhekeza elincinciweyo (HFrEF) endaweni ye-angiotensin yokuguqula i-enzyme (ACE) inhibitor okanye i-ARB yodwa. I-LCZ696 powder (i-sacubitril / i-valsartan powder) yavunywa yi-FDA ngoJulayi 2015 ukunciphisa umngcipheko wokufa ngenxa yezizathu zomoya kunye nokulaliswa kwezibilini kwimeko yezigulane ezinokukhubazeka kwintliziyo, i-NYHA i-II-IV, kunye necandelo elincinci le-ejection. Ukudibanisa kwe-neprilysin inhibition kunye ne-renin-angiotensin i-aldosterone system (RAAS) ziye zaboniswa ziphezulu kunezo ze-ACE inhibitor. Igama lezorhwebo le-LCZ696 powder yi-Entresto.
Umgangatho oqala wokuqala umthamo ngu-49 / 51 mg kabini imihla ngemihla.
I-dose yokuqala ye-LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) I-24 / 26 mg kabini imihla ngemihla inconywa kwezi zi gulane zilandelayo:
• I-ACE Inhibitor okanye i-ARB engenakho
• Umthamo ophantsi we-ACE inhibitor okanye unyango lwe-ARB: i-dose ephantsi ye-ACE inhibitor elilinganayo: i-enalapril <= 10 mg imihla ngemihla, i-dose ephantsi i-ARB efanayo: valsartan <= 160mg nsuku zonke
Umsebenzi ophezulu we-renal (GFR <30ml / min / 1.73m 2)
• Ukukhubazeka okuphezulu kwe-hepatic (Child-Pugh eklasini B)
Isilumkiso kwi powder LCZ696 eluhlaza
I-LCZ696 powder (i-sacubitril / valsartan powder) iboniswe ukunciphisa umngcipheko wokufa kwe-cardiovascular and failure of heart hospitalizations ukwenzela ukuhluleka kwentliziyo kwizigulane ezine-HFrEF ezingapheliyo, i-NYHA i-II-IV. I-LCZ696 powder eluhlaza (sacubitril / valsartan powder) kufuneka isetyenziswe ngokubambisana nezinye i-GDMTs endaweni ye-ACE inhibitor okanye i-ARB.
• Ukunyanzeliswa kwamanzi kwiyiphi na inxalenye.
Ukusetyenziswa okuhambisanayo kwe-ACE inhibitor: I-LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) akufanele ilawulwe kwiiyure ze-36 zokufumana i-ACE inhibitor.
• Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kwe-aliskiren kwizigulane ezineesifo seswekile.
• Imbali ye-angioedema enxulumene nophuhliso lwangaphambili kunye ne-ACE inhibitor okanye unyango lwe-ARB.
(1) Inetyhefu yobushushu: Zonke iziyobisi ezisebenza kwi-RAAS zingabangela ingozi kwi-fetus xa kunikwa ngexesha lokukhulelwa. Baya kunciphisa umsebenzi we-fetal umsebenzi wesibini kunye neyesithathu kwi-trimester yokukhulelwa kunye nokwandisa ukukhulelwa komntwana kunye nokufa komntwana. I-LCZ696 powder eluhlaza (sacubitril / valsartan powder) kufuneka inqunywe xa kutholakala ukukhulelwa.
(2) I-Angioedema: I-Angioedema ibikwa njenge-0.5% kunye ne-LZC696 (i-sacubitril / valsartan powder) kunye ne-0.2% kunye ne-enalapril ngexesha le-double-blind in PARADIGM-HF. Kwakukho negalelo elongeziweyo kwiMnyama ngokungafani nabangabomnyama kunye nalabo abanembali engaphambili ye-angioedema. Ukuba i-angioedema ivela, i-LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) kufuneka ishiywe kwaye akufanele i-rechallenged. I-LCZ696 powder eluhlaza (sacubitril / valsartan powder) akufanele isetyenziswe kulabo abanembali ye-angioedem ehambelana ne-ACE yangaphambili ye-inhibitor okanye i-ARB yonyango. Ukuba ukutshintshela okanye ukusuka kwi-ACE inhibitor, i-36-hour-clock time ishout efunekayo phakathi kweziyobisi.
(3) I-Hypotension: I-LCZ696 ipowder eluhlaza (sacubitril / valsartan powder) iyanciphisa uxinzelelo lwegazi ngenxa yokuvinjelwa kwayo kwe-RAAS kwaye inokubangela ukuba i-hypotension ibonakalise. Kwixesha elimbini eliyimfama le-PARADIGM-HF, i-18% yezigulane kwi-LCZ696 powder eluhlaza (sacubitril / valsartan powder) yabika umphumo ongathandekiyo we-hypotension kunye ne-12% kwizigulane nge-enalapril. Ekubeni kunomngcipheko omkhulu kulawo gulane ane-RAAS esebenzayo, kucetyiswa ukuba ulungise ityuwa okanye ukutshabalalisa ivolumu ngaphambi kokuqalisa. Ukuba kukho i-hypotension yeempawu, hlengisa i-diuretics nezinye i-antihypertensives, kwaye uphathe ezinye izizathu ze-hypovolemia kunye / okanye ukunciphisa umthamo we-LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder). Ukuba i-hypotension yeempawu iyaqhubeka naphezu kokuncipha kwe-LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder), isilwanyana singadinga ukuma.
(4) Umsebenzi ongenakonakalisa umhlathi: I-LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) yi-agent ye-RAAS evimbelayo; Ngoko ke, ukuncipha komsebenzi wenzalo kunokulindelwa kubantu abaphezulu bengozi kubandakanya abo abane-stalosis ye-renal. Kwixesha elimbini eliyimfama le-PARADIGM-HF, i-5% yalabo baphathwa nge-LCZ696 powder eluhlaza (sacubitril / valsartan powder) kunye ne-enalapril yabika ukungaphumeleli kwe-renal njengesiganeko esibi. Ukongeza, ukwanda kwi-Scr> = i-50% yabonwa kwi-16% yalabo baphathwa nge-LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) kunye ne-enalapril. Umsebenzi we-Renal kufuneka uhlolwe ngokusondeleyo kwaye i-LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) kufuneka iyancipha okanye imiswe ukwenzela ukuba ukunciphisa okwenyukayo kwi-functional renal.
(5) I-Hyperkalemia: Ngeempembelelo zayo kwi-blocked RAAS, i-LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) inakho ukudala i-hyperkalemia. Kwixesha elimbini eliyimfama le-PARADIGM-HF, i-12% yezigulane eziphathwe nge-LCZ696 powder eluhlaza (sacubitril / valsartan powder) yabika umphumo ongathandekiyo we-hyperkalemia. Ukongeza, i-potassium concentrations> i-5.5 mEq / L yabonwa kwi-16% yabathengiswayo kunye ne-LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) kunye ne-enalapril. Ukuvavanywa okuvaliweyo kunikwa iingcebiso kwizigulane ezinomngcipheko ezinjengokukhubazeka kwesibindi, isifo sikashukela, i-hypoaldosteronism, okanye ukutya okuphezulu kwe-potassium. Ukunciphisa umthamo okanye ukuyeka ukusetyenziswa kweziyobisi kunokuba kuyimfuneko ukwenyuka kwenyango kwi-potassium.
Ngokusekelwe kwisilingo sovavanyo lwe-PARADIGM-HF apho izigulane zifunwa ukuba zikwazi ukunyamezela i-enalapril kunye ne-LCZ696 powder eluhlaza (sacubitril / valsartan powder) ngexesha lokungahambi komfama ongaboniyo, mhlawumbi ukuba ezi ziphumo ziphantsi kwaye ingaba phezulu kwiinkqubo zekliniki.
I-LCZ696 powder yabangela ukunciphisa okukhulu kweBP kunokuba i-valsartan kwi-SHR kungakhathaliseki ukuba isantya yetyuwa, ehambelana nokuphuculiswa okuphawulekayo kwi-urinary excretion kunye nokunyanzeliswa komsebenzi. Ukongezelela, isiphumo sokuphuhlisa i-BP ye-LCZ696 ipowusi eluhlaza ibangele ukukhuselwa kwe-cardiovascular in rats.
Indlela yokuthenga i-LCZ696 powder kwi-AASraw